आफु कंगाल बनेको त्यो दिन पनि देखे यी बलिउड कलाकारहरुले ! जो अहिले खरब पति छन्
एजेन्सी – बलिउड चलचित्र उद्योग विश्वमा नै धनि मध्येको एक मानिन्छ र यहाँका स्टारहरुको अवस्थामा पनि निकै राम्रो छ । उनीहरुको लाइफस्टाइलका कारण सधैँ मानिसको नजरमा परिनै रहेका हुन्छन् ।
काठमाडौं – इंडियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा नेपाली युवा क्रिकेटरले खेल्ने निश्चित भएको छ । आईपीएल अक्सनको दोस्रो दिन दिल्ली डेयरडेविल्सले सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख भारुमा क्लब भित्र्याएको छ । यससँगै
पत्नीले काटिन् अाफ्नै लोग्नेको यौनांग ! ठूटाे याैनांग लिएर सिंह अस्पतालमा
आफ्नो श्रीमानले अरु कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध गाँसेको कुनचाहिँ महिलालाई सैह्य होला ? एकजना महिलाले यस्तै रिसको झोंकमा आफ्नो लोग्नेको यौनांग छिनालेर ट्वाइलेटमा बगाइदिएकी छन् । छिमेकी देश भारतको जालन्धरस्थित
विभिन्न देशका प्रहरीलाई छक्काउदै नेपाल आइपुगेका, कोरियाका मोस्ट वान्टेड अपराधी नेपालबाट पक्राउ
काठमाडौं,१० फागुन । विभिन्न देशका प्रहरीलाई छक्काउदै नेपाल आइपुगेको कोरियन अपराधिलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको कोरियन अपराधीलाई नेपाल प्रहरीले
भारतीय नागरिकले प्रलोभनमा पारी तीन महिलालाई भारतको दिल्ली लैजाँदै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो !
सुरुङ्गा, झापा, १० फागुन – प्रलोभनमा पारी तीन महिलालाई भारतको दिल्ली लैजाँदै गर्दा प्रहरीले आज एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेका छन् । पक्राउपर्नेमा भारत किसनगञ्ज जिल्ला धन्तोला ग्रामपञ्चायत महामारी गाउँका
संसारका सबैभन्दा बढी कमाउने १० फिल्म यि हुन्, जस्को ८ बर्ष देखि ‘अवतार’को रेकर्ड तोडिएन
काठमाडौं – मार्वल स्टुडियोको फिल्म ‘ब्याक प्यान्थर’ बक्स अफिसमा जबरजस्त कमाई गरिरहेको छ । फिल्मले पाँच दिनमा २९०१ करोड कमाएको छ । जुन रफ्तारमा फिल्मले कमाइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा बक्स
बलिउडका १० धनी हिरोइन, कसको सम्पत्ति कति ?
एजेन्सी । एउटै फिल्मबाट करोडौं कमाउने बलिउडका हिरोइन फिल्मको साथसाथ दोस्रो कारोबारमा पनि जोडिएका छन । जहाँबाट उनीहरुको कमाई हुन्छ । यहाँ बलिउडका सबैभन्दा धनी हिरोइनहरुकोको बारेमा बताइएको छ ।
यी हुन् चलचित्र छोडेर विदेश पलायन भएका नेपाली नायिकाहरु ! कहाँ के गर्दै छन् ?
काठमाडौं – करिअरको सुरुवातमा मेरो संसार नै यही हो भनेर संघर्ष गर्ने धेरै अभिनेतृ अहिले नेपालमा छैनन् । सिने नगरीमा कमै मात्र महिलाको उपस्थिति हुँदा नै राम्रो नाम बनाएका धेरै
पलको बर्थडेमा आँचलको रुवाबसी, हेर्नुहोस् जस्ताको त्यस्तै (भिडियो)
फेरी सुरु हुँदैछ नेपाल आईडल २, को- को हुनेछन् जजहरु ? (भिडियो सहित)
फेरी सुरु हुँदैछ नेपाल आईडल २, को- को हुनेछन् जजहरु ? (भिडियो सहित) ﻿